Lasa Sahisahy Ireo Vietnamiana Mpisera Anaty Aterineto, Na Eo Aza Ireo Lalàna Henjana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Avrily 2015 11:33 GMT
Sary avy amin'ny Viet Tan
Na teo aza ireo fameperana henjana nanjo ny fahalalahana maneho hevitra ao Vietnam, mitombo ny isan'ireo mpisera mavitrika ety anaty tambajotran'ny aterineto izay maneho ny fomba fijeriny momba ireo olana sosialy sy pôlitika.
Manana vahoaka 93 tapitrisa i Vietnam ary mpampiasa ny aterineto fototra efa ho 40 tapitrisa. Misy 30 tapitrisa mahery no mpampiasa mavitrika ny Facebook, fitsambikinana nahazendana hatramin'ny 2012, fony mbola 8,5 tapitrisa monja io isa io. Ankoatra izay, somary tapatapaka matetika ihany io tambajotra malaza io tao Vietnam tato anatin'ny taona vitsy.
Miresaka momba ilay olana ny tatitra iray vao haingana avy amin'ny Viet Tan, antoko politika iray mpandàla demaokrasia tarihan'ireo olon-tsotra Vietnamiana ao anatiny sy ivelan'ny firenena. Na dia nandany lalàna samihafa aza ny governemanta hikendrena ny hifehezana ny fampiasàna ny aterineto sy ny votoatiny, “mitàna ho azy ny toeran'ny media tsy miankina ny media sôsialy izay nahita fiantraikany ara-tsosialy sy politika,” hoy ilay vondrona. Nanamarika ihany koa ry zareo fa “manome toerana ny daholobe sy ireo vondrom-piarahamonina virtoaly ihany koa ireo sehatra ety anaty aterineto,” indrindra fa hatramin'ny naneriterena ny fahalalahana hifamory tao amin'ny firenena.
Noho ny media sôsialy dia lasa azo atao ary imasom-bahoaka mihitsy aza amin'ny hoavy ny manontany ny maha-mamim-bahoaka ny Antoko Kaominista.
Satria Vietnam manosika ny hirosoana amin'ny fifandraisana bebe kokoa amin'ireo vondron'olona tsy mitsaha-mitombo ety anaty aterineto mampiseho ny faniriany ho afaka mampihatra ny zony hiserasera, ho sarotsarotra ihany ho an'ny governemanta ny hahatanterahany sivana.
Nandritry ny kaonferansa RightsCon momba ny zon'olombelona sy ny teknolojia, natao tany Manilla tamin'ny volana lasa no nanoloran'ny Viet Tan ny fandalinana nataony momba ny tontolon'ny media sôsialy tao Vietnam.
Nomarihan'ny Viet Tan fa raha tadiavina ao amin'ny YouTube ireto teny ireto “cong an danh nguoi” (habibian'ny polisy) dia vokatra 148.000 no azo. Marobe koa ireo nizara saripika tamin'ny tenifototra “tsy tiako ny Antoko Kaominista ao Vietnam” (Toi khong thich dang cong san Viet Nam). Bilaogy iray vaovao antsoina hoe “Kisarim-Pahefana” (Chan Dung Quyen Luc) no namoaka ireo tsiambaratelo maloton'ny sasantsasany amin'ireo tomponandraikitra ambony.
Nahangona fanohanana malaza ilay fanentanana iray vao haingana natao hanoherana ny fanapahana ireo hazo 6.700 tao Hanoi, nanery ny manampahefana hampiantona ilay drafitra.
Huong Le Thu, mpikaroka ary mpiara-miasa ao amin'ny Ivontoerana Fanovozam-pahalalana momba an'i Azia Atsimo-Atsinanana ao Singapore, dia nanamarika ihany koa ny fitomboan'ny tsy fitokisana eny anivon'ny sasany amin'ireo mpisera ety anaty aterineto. Nanoratra izy tao amin'ny New Mandala, gazety iray ety anaty aterineto mifantoka amin'ny Azia Atsimo-Atsinanana fa :
Tondro iray maneho ny fiovàna ny hoe tsy matahotra milaza ny famantarana azy intsony ny olona rehefa mandefa sorabaventy mamely ny fitondràna, mampakatra ny sariny sy mamoaka ny tena mombamomba azy ety anaty aterineto.
Kafe Aterineto ao Vietnam. Sary ao amin'ny Flickr an'i Kent Goldman (CC License)
Raha marina fa mibahana tranonkala marobe i Vietnam, ny tatitra kosa milaza fa 60 isanjaton'ny mpampiasa aterineto no mampiasa lohamilina misy VPN (Virtual Private Networks) na “proxy” mba hidirana amin'ireo votoaty voasivana. Ny andikàn'ny Viet Tan an'io dia hoe “reraky ny fanarahamaso ataon'ny governemanta” sahady ireo mpisera ety anaty aterineto
Eken'ny sasany amin'ireo Vietnamiana manampahefana ny fahasarotan'ny fametrahana politika momba ny tranonkala. Na ny praiminisitra aza dia naneho hevitra tamin'ny Janoary iny fa “tsy ho vita ny handràra na hisakana ny olona tsy handefa vaovao ao amin'ny aterineto.”
Saingy tsy midika izany fa nilaozana ny resaka politikan'ny aterineto. Raha ny isanandro, ireo Vientamiana mpisera anaty aterineto dia tsy maintsy mamakivaky ireo fitsipika fameperana natao ho an'ny media sosialy ary ireo politika tahàka ny Didim-panjakana faha 72, izay mikendry ny handràra ny fanangonana vaovao sy fizaràna ireny ety anaty media sôsialy. Lalàna iray hafa efa fampiasa mba hanenjehana ireo mpiteny ety anaty aterineto ny Artikla 258 ao amin'ny Lalàna Famaizana, izay manasazy ny fampiasàna amin'ny tsy tokony ho izy ny “fahalalahana demaokratika mba hamelezana ny tombontsoam-panjakana sy ny zo ara-drariny sy ny tombontsoan'ireo vondron'olona na ny isam-batan'olona.”
Ny fampiasàna ireo sary mananihany ‘mpanefy hevitra’ na tohanan'ny governemanta mba handemena ny asan'ireo mpikatroka mafàna fo dia manaporofo fa misy fomba hafa atao haneriterena ny fahalalahana maneho hevitra ao amin'ny firenena. Nambaran'ny Viet Tan tamin'ny Global Voices tao anatin'ny mailaka iray fa mbola miasa amin'izao fotoana izao ireny ‘mpanefy hevitra” ireny :
Mitohy ho olana hatrany ny fampiasàna ireo mpanefy hevitra. Sady koa, betsaka ireo mpikatroka mafàna fo no nahita ny kaontiny Facebook ho misy mijirika ary misy mangalatra ny tenimiafina fampiasany. Tahàka ny tsy ho vitan'ny governemanta ny hibahana ny FB ankehitriny, saingy azo antoka fa hanandrana hanao izay tsy hampahomby azy io sy tsy hitiavana azy ry zareo.
Manohy misotasota sy misambotra ireo bilaogera sangany ihany koa i Vietnam, tetikady izay “ampitahorana ilay vondrom-piarahamonina midadasika indrindra ety anaty aterineto tsy hiresaka votoaty politika saropady.” Asongadin'ny Viet Tan fa io dia mbola mijanona hatrany ho “ny fanamby goavana atrehan'ny vondrom-pirahamonin'ireo Vietnamiana ety anaty serasera.” Mbola misy 16 ny mpanao gazety sy bilaogera voatana ao Vietnam.
Viet Tan nilaza fa ankoatry ny fanentanana ho famotsorana ireo mpanoratra tsy mitovy hevitra amin'ny mpitondra, azon'ny vondrom-piarahamonina iraisam-pirenena atao ny “miteny mafy an'ireo orinasa Tandrefana izay manome teknolojia fanivànana ho an'ny fanjakana Vietnamiana ary manainga ireo orinasa Tandrefana mpamokatra teknolojia tsy hanan-draharaha amin'ireo mpanivana.”
Na tiana na tsy tian'ny Antoko Kaomionista, miova ny tontolon'ny fampahalalana vaovao ao Vietnam. Enga anie, hahazo alàlana hiroborobo eny amin'ny habaka anaty sy ivelan'ny aterineto ireo feo manakiana.